गब्बर सिंहले जब यी १४ बर्षय बालिकालाई भने ‘तिमी चाँडै ठुली हुनु म तिमी संग बिहे गर्न चाहन्छु’ – List Khabar
Home / समाचार / गब्बर सिंहले जब यी १४ बर्षय बालिकालाई भने ‘तिमी चाँडै ठुली हुनु म तिमी संग बिहे गर्न चाहन्छु’
गब्बर सिंहले जब यी १४ बर्षय बालिकालाई भने ‘तिमी चाँडै ठुली हुनु म तिमी संग बिहे गर्न चाहन्छु’
admin October 27, 2021 समाचार Leaveacomment 90 Views
काठमाडौं । बलिउडको सबैभन्दा चर्चित फिल्म शोलेमा खलनायक गब्बर सिंहको भूमिका निभाएका अमजद खानलाई कसले पो चिन्दैनन् र ? अमजद खान, जसले हिन्दी सिनेमा मा आफ्नो क्षमता साबित गरेका छन्, आफ्नो समय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेताहरु मध्ये एक थिए।
अमजद खान, जसले फिल्ममा मुख्य रूप बाट नकारात्मक पात्रहरु खेलेका थिए, शोले मा गब्बर सिंह को चरित्र लाई जनता को दिल मा सदा अमर बनायो। यस बाहेक, उनले ‘लावारी’, ‘हीरालाल-पन्नालाल’, ‘पर्वरीश’, ‘मुकद्दार का सिकंदर’, आदि जस्ता एक भन्दा बढी सुपरहिट फिल्महरुमा अभिनय गरे।
तर आज हामी तपाईलाई अमजद खान को व्यक्तिगत जीवन को बारे मा केहि रहस्यमय कुरा बताउछौ जुन तपाईले पहिले कहिल्यै सुन्नु भएको छैन। अमजद खानको जन्म १२ नोभेम्बर १९४० को पेशावरमा भएको थियो, जुन अहिले पाकिस्तानमा छ।
अमजदका बुबा जकरिया खानले पनि फिल्ममा खलनायकको भूमिका निभाएका थिए, त्यसैले यो भन्न सकिन्छ कि अमजद खानले अभिनय विरासतमा पाए। अमजद खानको विवाह १९७२ मा शेहला खानसँग भएको थियो। भनिन्छ कि शेहला मात्र १४ बर्षकी थिइन् जब दुबैको पहिलो भेट भयो र उनीहरु एक क्लबमा भेटिए।
यो उल्लेखनीय छ कि अमजद र शेहला छिमेकी थिए र दुबै मुम्बई को बान्द्रा क्षेत्र मा बस्थे। एक दिन अमजदले शेहलालाई ब्याडमिन्टन कोर्टमा खेलिरहेको देखे र उनलाई सोधे, “तिम्रो उमेर कति भयो?” शेहलाले जवाफ मा भनिन् १४ बर्ष , अमजदले उनलाई भने कि तिमी चाँडै ठुली हुनु पर्छ किनकि म तिमी संग बिहे गर्न चाहन्छु।
शेहलाले एक अन्तर्वार्ताको क्रममा भनेकी थिइन् कि अमजदले उनको घरमा विवाहको प्रस्ताव पठाइन्, जुन उनको परिवारका सदस्यहरुले अस्वीकार गरे किनभने शेहला त्यस समय धेरै जवान थिइन्। तर अझै पनी दुबै बीचको प्रेम घटेन र दुबै जना सधैं गोप्य भेटघाट गरिरहे। अन्ततः उनीहरुका परिवारहरु विवाहमा सहमत भए, जस पछि दुबै जनाले सन् १९७२ मा बिहे गरे। विवाहको एक वर्ष पछि, १९७३ मा उनीहरुको एक छोरा भयो जसको नाम उनीहरुले शादाब राखे।
Previous पेट दुखेर अस्पताल पुगेका बिरामीको भिडियो एक्सरे हेर्दा डाक्टर कै होस उड्यो !
Next लता मंगेशकरको अधुरो प्रेम कहानी- जसका कारण उनले जिवनभर विवाह गरिनन्